အွန်လိုင်း WEBCAM မှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကိုဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အွန်လိုင်းတစ်ဦး webcam ကနေမှတ်တမ်းဗီဒီယိုက
တခါတလေအဲဒီမှာကင်မရာပေါ်အမြန်မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုအတွက်တစ်ဦးလိုအပ်ကြောင်း, သို့သော်လိုအပ်သော software ကိုလက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်လည်း install လုပ်ရမည့်အချိန်။ အင်တာနက်ကိုတွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ပစ္စည်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအားလုံး၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်မပေးရန်ခွင့်ပြုကြောင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ အချိန်ကို-စမ်းသပ်ပြီးနှင့်သုံးစွဲသူများအနက်ဤဆိုဒ်များအနည်းငယ်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ webcam ကနေဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖမ်းဆီးဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ webcam ကနေဗွီဒီယိုတစ်ခု Create
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားလုံးန်ဆောင်မှုဟာသူတို့ရဲ့မူလ function ကိုရှိသည်။ သူတို့ကိုမဆိုတွင်, သင်ကဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိုးရိမ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုကိုဖယ်ရှားလို့မရပါဘူး။ မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်စေရန်, က်ဘ်ဆိုက်များကို Adobe Flash Player ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိသည်ဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: Adobe Flash Player ကို update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
Method ကို 1: Clipchamp
အမြင့်ဆုံးသောအရည်အသွေးနှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဘို့အဆင်ပြေအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုမှာ။ တက်ကြွစွာ developer ကထောက်ခံခေတ်သစ် site ကို။ ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဒြပ်စင်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်။ Created စီမံကိန်းကိုချက်ချင်းလိုချင်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်မှကိုစလှေတျနိုငျသညျ။ အချိန်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း5မိနစ်မှကန့်သတ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်သွားပြီးခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို" အဓိကစာမျက်နှာပေါ်မှာ။
Service ကို access ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြီးသားအကောင့်တစ်ခုရှိပါက, သင့် e-mail လိပ်စာနှင့်အတူလက်မှတ်ထိုးသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်။ ထို့အပြင် Google နဲ့ Facebook မှာအနေဖြင့်အမြန်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ခွင့်ပြုချက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
လက်ျာဘက်၌ဝင်ရောက်ပြီးနောက်တည်းဖြတ်ချုံ့နှင့်ဗီဒီယိုကို formats ပြောင်းပြတင်းပေါက်လည်းမရှိ။ လိုအပ်သောလျှင်, သင်ပြတင်းပေါက်သို့တိုက်ရိုက်ဖိုင်ကိုဆွဲအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသုံးနိုင်သည်။
ရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောတွန်းအားပေး button ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်နိုင်ရန် "မှတ်တမ်း".
သင့်ရဲ့ webcam နဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးစွဲဖို့အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုကိုခွင့်ပြုချက်။ ကျနော်တို့အပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သဘောတူ "Allow" ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
သငျသညျမှတ်တမ်းတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, စာနယ်ဇင်း "Start ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်" ပြတင်းပေါက်၏ဗဟို၌တည်၏။
သင့်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုဘျဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်ပို့စ် window ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာတပ်မက်လိုချင်သောအရွေးနိုင်သည်။
တူညီသော panel ကိုထွက်သယ်ဆောင်တက်ကြွစွာမိုက်ကရိုဖုန်း, ထောင်မှူး, ဌာန၏ပြောင်းလဲနေသောပစ္စည်းကိရိယာများပြောင်းခြင်း။
ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရဖို့နောက်ဆုံးပစ္စည်းကို - ထိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုအရည်အသွေး။ ရွေးကောက်တော်မူသောတန်ဖိုးအနာဂတ်ရုပ်ရှင်၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူ 360p ကနေ 1080p ရန် resolution ကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးခေတ္တနား, စံချိန်နှင့်၎င်း၏ဇာတ်သိမ်းပြန်ဖွင်: သင်မှတ်တမ်းတင် start ပြီးနောက်သုံးအဓိကဒြပ်စင်ရှိပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ပြီးခဲ့သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်, သေနတ်ပစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် "ပြီးပြီ".
ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက် webcam အပေါ်ရိုက်ချက်အရအချောရုပ်ရှင်ပြင်ဆင်မှုကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်:
ဗီဒီယို၏တောင်းဆိုချက်အရစာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိထွန်းသစ်စ tools များအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်မှာပြင်ဆင်ကြ၏။
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ် « Skip » တူရိယာနှင့်အတူညာဘက် panel က။
window အချောစီမံကိန်းကို (1) preview;
(2) သည်မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဗီဒီယို Download;
ဒေသခံတစ်ဦး disk ကို (3) မှဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။
Method ကို 2: Cam-Recorder
အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြီးမားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Adobe Flash Player ကိုဖွင့်။
အဆိုပါ site ကို Flash Player ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုတွန်း "Allow".
အခုတော့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကင်မရာ Flash Player ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြု "Allow" အလယ်၌သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
site ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်က်ဘ်ကင်မရာကိုနှင့်၎င်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးပါရန်ခွင့်ပြုသည် "Allow" ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
, မိုက်ခရိုဖုန်းအသံဖမ်း၏အသံအတိုးအကျယ်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အသံဖမ်း frame rate ကို select လုပ်ပါ: မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုမီ, သင့်ကိုယ်သင် parameters တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲပြီးတာနဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ် "Start ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်".
FLV format နဲ့အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၌ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် "ဒေါင်းလုပ်".
ဖိုင်က boot folder ထဲမှာ installed browser ကိုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
Method ကို 3: အွန်လိုင်းဗီဒီယို Recorder
developer များဟုပြောသည့်အတိုင်းဤဝန်ဆောင်မှုမှာ, သင်က၎င်း၏ကြာချိန်ပေါ်မဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, သင့် webcam ကနေမှတ်တမ်းတင်ကိုအကောင်းဆုံးဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောဒေတာလုံခြုံရေးက၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ကကတိပြုသည်။ ဒီ site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်းကို Adobe Flash Player ကိုများနှင့်အသံဖမ်းများအတွက်ကိရိယာ access ကိုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ webcam နှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းဗီဒီယို Recorder ဝန်ဆောင်မှုကိုသွားပါ
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို item နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကို web ကင်မရာနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးခွင့်ပြုရန် "Allow" ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
တစ်မိုက်ခရိုဖုန်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် webcam ပါပေမယ့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် browser ကို re-ခွင့်ပြု "Allow".
အနာဂတ်ဗီဒီယိုအတွက်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်ဘောင်၏မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို set up ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုမီ။ ထို့အပြင်သင်ကဗီဒီယို setting ကို specular ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်ရမှတ်အတွက်သင့်လျော်သောခြစ်ကွက်များ setting အသုံးပြုပုံမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖို့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိ gear ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦးအခန်းထဲသို့ (1) အဖြစ်ရွေးချယ်ရေး device ကို;
တစ်မိုက်ခရိုဖုန်း (2) အဖြစ်ရွေးချယ်ရေး device ကို;
ဗီဒီယိုများ (3) ၏အနာဂတ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချိန်ညှိခြင်း။
သင် webcam ထဲကနေမှသာပုံရိပ်ကိုရိုက်ကူးချင်တယ်ဆိုရင်သင် window ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ထဲမှာ icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, မိုက်ခရိုဖုန်းနိုင်ပါတယ်အသံတိတ်။
လေ့ကျင့်ရေး၏အဆုံးပြီးနောက်သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပြတင်းပေါက်၏အောက်ဆုံးမှာအနီရောင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
စံချိန်ခလုတ်ကိုနှင့် timer နေရာမှာထိပ်စံချိန်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "Stop"။ သင်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ချင်လျှင်သုံးပါ။
အဆိုပါ site ကိုပစ္စည်းကို process နှင့်သင်ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ခင်ကကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းပေး, ထို့နောက်တဖန်တုံ shoot, ဒါမှမဟုတ်အချောပစ္စည်းကယ်တင်မည်။
re-entry ကို (2);
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် disk space ကိုဗီဒီယိုသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ် Google Drive ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုများကို Dropbox ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ် (3) ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: webcam မှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါကအလွန်ရိုးရှင်းဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဖန်တီးရန်တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်။ အခြားသူများကိုအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းပေမယ့်သေးငယ်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ပါစေနေချိန်မှာတချို့ကနည်းလမ်းများ, သင်ဗီဒီယိုန့်အသတ်အရှည်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်တို့အပေါ်မှာ-line ကိုလုံလောက်အောင်မှတ်တမ်းတင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါကသင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် software ကိုသုံးပါနှင့်ကောင်းတစ်ဦးရလဒ်ရရှိနိုင်သည်။